Alexis Sanchez,Aubameyang, Ronadlo & Wararkii Maanta Ugu Hadal Haynta Badan Suuqa Kala iibsiga – Kooxda.com
Home 2018 January Suuqa, Wararka Maanta Alexis Sanchez,Aubameyang, Ronadlo & Wararkii Maanta Ugu Hadal Haynta Badan Suuqa Kala iibsiga
Alexis Sanchez,Aubameyang, Ronadlo & Wararkii Maanta Ugu Hadal Haynta Badan Suuqa Kala iibsiga
Suuqa kala iibsiga ayaa ah mid aad u mashquul badan iyada oo ay haatan durba ka hartay muddo 15 maalmood ah inaga xigaan in uu suuqu xirmo.
Kooxo badan ayaa wakhtiga la tartamaya si ay u dhamaystiraan saxiixyada ay uga baahan yihiin in ay ku xoojiyaan kooxdooda una dhamaystiraan saxiixyada ay doonayaan.
Hadaba waxa aanu halkan ku soo koobi doonaa wararkii maanta ugu hadal haynta badnaa ee sida weyn looga hadal hayay wargaysyada kala duwan iyo waliba qaar aanu kooxda.com idiinku soo gudbinay.
Alexis Sanchez ayay isku baacsanayeen kooxaha Man United,Man city iyo Chelsea waxana haatan hogaanka u haysa kooxda Man United, Si kasta ha ahaatee wakiilka caanka ah ee Mino Raiola ayaa sheega in heshiisku ku xiran yahay xiddiga Henrikh Mkhitaryan.
Theo Walcott ayaa haatan ku sugan garoonka tababarka kooxda Everton isaga oo ku baasay tijaabada caafimaadka kooxda Everton-na ugu biiray lacag dhan 20 milyan oo euro.
Kooxda Real Madrid ayaa diyaar u ah in ay iibiso Cristiano Ronaldo sida uu sheegayo khabiirka reer Spain ee Guillem Balague kaas oo sheegaya in uuna kooxda ku faraxsanayn kadib markii loo oofin waayay balan loo dhigay.
Kooxda chelsea ayaa xiriir la samaysay kooxda West Ham iyaga oo doonaya in ay si toos ah ula saxiixdaan sida ay fahamsantahay Sku Sport.
Kooxda West Brom ayaa xaqiijisay in aynka kooxaha Man City iyo Arsenal toona xiriir dambe la samayn xiddiga daafaca uga ciyaara kooxdaas ee Jonny Evans.
Kooxda Napoli ayaa dalab 20 milyan ah ka gudbisay goolhayaha kooxda Liverpool ee Simon Mignolet kaas oo sheegay in uu isaga tagayo kooxda Liverpool.
Aubameyang oo warqada bixitaanka u gudbiyay kooxdiisa Dortmund si uu ugu qasbo in uu ku biiro kooxda Arsenal inta lagu guda jiro suuqa January.